musha AFRAN FOOTBALL STORI Nigerian Nhabvu Vatambi Victor Osimhen Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yakazara YeNigerian Soccer Genius ane zita "Vic". Yedu Victor Osimhen Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Hupenyu uye Kukura kwaVictor Osimhen. Image Credits: Vanguard, NigerianNewsDirect uye Twitter
Hungu, munhu wose anoziva kuti iye akanyanya-ane tarenda rinorova neziso zvekutora zvibodzwa zvakanaka. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveVictor Osimhen's biography iyo inonyanya kufadza. Iye zvino pasina kumbopfuurira mberi, ngatitangei.
Victor Osimhen Childhood Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Kutanga kuenda, mazita ake akazara ndiVictor James Osimhen. Victor Osimhen sezvaaigara achifona akazvarwa pa 29th zuva raDecember 1998 kuna amai vake uye baba vachembera, Mukuru Patrick Osimhen muguta reLagos, Nigeria. Iye aive wekupedzisira pavana vatanhatu akazvarwa kuvabereki vake vaakanaka vanoratidzwa pazasi.
Vabereki vaVictor Osimhen- Tete vake- Mukuru Partick & vanonoka mai. Mufananidzo Chikwereti: NigerianNewsDirect uye IG
Vabereki vaVictor vane mhuri yavo yakabva kuSouthern Nigeria chaizvo Esan South East Local Government Area yeEdo State muNigeria. Mhuri yake yesurname iyo iri “OsimhenZvinoreva kuti 'Mwari wakanaka'mumutauro wechiIshan.
Kufanana nevakawanda vanozivikanwa vanofamba nhabvu muSouthern Nigeria, Victor Osimhen anobva kumhuri isina kunaka yemhuri. Asati aberekwa, vabereki vake vakaita chisarudzo chekutizira kuguta re "Lagos”Guta rezvehupfumi reNigeria. Kunyangwe vachiri kuLagos, mhuri yakatarisana nekunetseka, imwe yaive yakakura zvekuti Victor mudiki, panguva iyoyo mwana mudiki, akagadzirwa kutarisana nezuva rinopisa muLagos traffic uko amai vacho vaitengesa sachet mvura kuti vawedzere mari yavo yemubhadharo.
Victor Osimhen akakurira pamwe nemunun'una wake Andrew uye 4 vamwe babamunini kuOlososun, a diki nharaunda yakatenderedza Oregun, Ikeja, Lagos. Iyi nharaunda inogara imwe yemadhorobha makuru muAfrica. Kukura mumakore ake ekuumbwa, Victor Osimhen akachembera uye akahwanda sachet mvura uye zvimwe zvinhu zveimba mumigwagwa kuitira kuti awane mari yekudzidzira uye kupona kwemhuri.TheNationOnlineng Mishumo).
Victor Osimhen Childhood Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Dzidzo neKubata Buildup
Olusosun Primary School iyo yaakapinda yakashanda senzvimbo yemusangano wenhabvu yevadzidzi vese vechidiki uye vechidiki munharaunda.
Olusosun chikoro chepuraimari- Iko rwendo rwebhola rwakatanga. Chikwereti: LagosSchoolsOnline
Manheru ega ega, vakomana vazhinji kusanganisira Victor anoenda kunhandare yebhola kuti anoona mukoma wake mukuru aive nyeredzi yenzvimbo munharaunda. Wokutanga wedzinza wemhuri yavo anonzi Andrew akasiya dzidzo yake kuti awane mari yekuriritira Victor nevamwe vake hama.
Aides hawking, Victor akadzidzawo kutamba bhora achitenda kumukuru wake, Andrew. Aivewo achishuvira nezveChelsea FC sezvaaiona timu yacho ichitamba munzvimbo dzekuona. Iye pamwe nenhengo dzenhengo dzemhuri yake vaive vateveri vakakura vechikwata cheNigeria (Super Eagles). Tsigiro yechikwata pamwe chete nechido chake chekutamba mutambo uyu chakagadzira shungu yekuve nyanzvi.
Kuona kuti mukoma wake mudiki aive netarenda, Andrew aifanira kusiya mutambo uyu kuti atarisana nebhizinesi rake repepanhau. Akarasawo zano rekuenderera mberi nedzidzo yake kuti awane mari yekubatsira munin'ina wake waakamutsidzira kuti ave mashura.
Victor Osimhen Childhood Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Basa Rokutanga Upenyu
Hazvina kutora nguva kuti hope dzemhuri dzisati dzatanga kubhadhara sezvo vatambi venhabvu vemunharaunda vakaona chimwe chinhu chakakosha nezvaVictor uye ndokuzomukoka kuUlitmate Strikers Academy kuLagos kwaakawana muedzo wake wekutanga kubudirira.
Mugore re2014, kuita kwaVictor Osimhen ne Ultimate Strikers kwakamuona achikokwa necoach Amuneke kumiririra nyika yake U-17 timu. Cherechedza: Chikwata chenyika cheNigeria U-17 nhabvu inozivikanwa seGolden Eaglets, ndiyo timu yechidiki iyo inomiririra nyika yeNigeria munhabvu. Victor Osimhen akabatsira mukubatsira timu kuti ikwane U-17 FIFA World Cup iyo yakaitirwa muChile.
Iyo 2015 FIFA U-17 Mutambo: Victor Osimhen akatanga zvakanaka mumakwikwi aya apo aipika zvibodzwa zviviri zvikuru pane izvi, achikunda mamirioni emoyo kusanganisira iya yeEuropean scouts yakapoterera izwi. Osimhen aive akakosha kubudirira kweNi-17 yekuNigeria kuFIFA World Cup muChile. Asides anobatsira nyika yake kuhwina mukwikwidzi, uyo ane tarenda wekuNigeria akahwina mubairo wepamusoro-soro unovaviga mushure mekupfura zvibodzwa zve10 uyezve neFIFA U-17 World Cup Siliva Bhora.
Victor Osimhen anokwanisa pamwe neFIFA yake U-17 World Cup Goridhe Boot uye sirivha Ball. Credits: Jumia uye Mazana nemazana
Victor Osimhen Childhood Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Mugwagwa Mukurumbira Nhau
Mushure meMutambo weNyika, zvakaratidzwa kuti makirabhu akakura kubva kuEurope, zvinofarirwa neArsenal, Man guta, uye Tottenham Hotspur, mushure memasevhisi ake. Zvinotyisa, Victor Osimhen akaramba zvese zvaakapihwa nekuti imwe yakakura-uremu kirabhu yakanga yamupa mari hombe.
Nguva diki mushure mekunge atumidzwa zita re2015 African Youth Player yeGore kumaCAF Awards muA Abuja muna Ndira 2016, Osimhen akazivisa nyika kuti achange achitevera basa rake reunyanzvi neGerman Bundesliga kirabhu, Wolfsburg. Maererano naye, kuvimbiswa kwechikwata ichi pamwe chete nemari yakanga iri yekukurudzira mhuri yake uye kuti anosarudza kutamba nhabvu yeGerman kwete chero yepamusoro muEurope.
Agony kuGermany: Osimhen akasaina chibvumirano chetatu-nehafu-gore pamberi pekontrakiti kusvika munaJune 2020 uye akaita dhiri rake mumutambo weGerman wepamusoro munaMay 2017. Achangoita mwedzi mina yekugadzira Bundesliga yake, matambudziko akatanga kutungamira muNigerian. Kukuvara kwepafudzi kwakamuita kuti apinde mukuvhiyiwa izvo zvakaunza kuguma kusati kwasvika kumwaka wake wekutanga. Achipedzisa pazinga rakashata iri, Victor Osimhen (akafananidzirwa pazasi) akave asingazivikanwe nekirabhu yepamusoro.
Victor Osimhen achitarisa aine tariro apo airwisa nekukuvara uye kurwara kuGermany. Kunobva Twitter.
Osimhen hope dzese dzakapfuurira mushure mekupora kubva kukuvara kwake papfudzi. Panguva ino, kwaive kurwara uko kwakatora nzvimbo, kumuita kuti apote pre-mwaka uye zvakanyanya kurwadza, arasikirwa neNigeria 2018 world cup sarudzo. Waizviziva here? Aive muchipatara panguva yeRussia 2018 FIFA World Cup.
Victor Osimhen Childhood Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Kumuka Mukurumbira Nhau
Zvakatora Osimhen nezve 2 mwaka anorwadza kuti abude muhusiku hwake. Kusapindirana nekuda kwekukuvara uye kurwara kwakamuona achirovera zero (0) zvinangwa kuWolfsburg nekudaro achishatisa basa rake mukuita.
Achienderera mberi, Osimhen akagadzira pfungwa yake kuti aende kunoyedzwa kwezhizha nezvikwata zveBelgian Zulte Waregem naClub Brugge, avo panguva iyoyo vaive vatongi vekutonga. INE, Hutano hwake hwakarova dombo pasi paakarwara nemarariya izvo zvakabata hutano hwake uye zvakaita kuti makirabhu ese maviri arambe iye.
Pa 22 Nyamavhuvhu 2018 ndiyo yaive zuva racho vamwari venhabvu ndakamunzwira tsitsi. Raive zuva reBelgian klabhu Charleroi akamugamuchira pamubhadharo wenguva refu yekukwereta. Victor Osimhen akaita kubhururuka kwake zvizere pa22 Nyamavhuvhu, achirovera chinangwa chake chekutanga sehunyanzvi aine backheel. Mushure memutambo, Osimhen akaudza BBC Sport kuti akange aineakawana mufaro wake zvakare mushure mekumirira kwenguva refu kudaro".
Victor Osimhen akazowana mufaro wake mushure mekumirira kwenguva refu kudaro. Kiredhiti chinangwa
Murwere wekuNigerian aive neruzivo rwakabudirira neBelgian side, achitamba mitambo ye36 uye achiviga zvibodzwa zve20, iyo feat yakaita kuti kirabhu yake, Charleroi, kuvandudza sarudzo yavo kuti vamuwane achiri kukwereta. Mushure mekutonga nhabvu muBelgium, wekuNigeria akanzwa kuti yaive nguva yakakodzera yekukwira munzira yake kumashure semutambi weAfrica anotungamira waakambove. MunaJulai 2019, akaita danho repamusoro muhupenyu hwake nekusaina kweLille OSC.
Victor Osimhen Simudza Rukudzo Nhau. Image Chikwereti: chinangwa
Panzvimbo pekugumburwa nekukuvara kwepafudzi uye marariya, munhu wekuNigeria akarova kubva simba kusvika pakusimba, achitsungirira pakukwira kwemametoros kunosvika mukurumbira kuva INE, imwe yenhabvu inopisa kwazvo zvivakwa Africa. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Victor Osimhen Childhood Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Ukama Hupenyu
Nekusimuka kwake mukurumbira muEurope, tine chokwadi chekuti vateveri vazhinji vangadai vakabvunza kana Victor Osimhen, sapamazuva ekunyora, aine musikana.
Victor Osimhen Musikana musikana ndiani? Mufananidzo Wekodhi: IG
Hapana kuramba chinhu chekuti hunhu hwaOsimhen hunonakidza kusanganisira kushambidzika, kuvimbika, kushanda nesimba uye kuzvininipisa hazvingaite kuti vakadzi vatende kuti achaita mukomana ari nani.
Asati ave nemukurumbira, zvainzi Oshimen akadanana nemusikana anoyevedza anoenda zita rekuti Ropafadzo. Munguva yehukama hwavo, vaviri vaviri vaigara vachigovana mifananidzo yeumwe neumwe pa Instagram. Hukama hwaOsimhen hunonzi hukama nemusikana wake hwakaoneswa pachena kweanenge makore 2 asati afunga zano rekumuvhunza kubva kune yega yega yaaibata munhau.
Victor Osimhen Musikana
Kubva mushure mekunge ruzivo rwake rwatsvairwa pasocial media, runyerekupe rwakaramba ruripo, izvo zvaiti Blessing anga asiri musikana waOsimhen asi mukadzi wake akabiwa. Kutarisa kuburikidza neyemagariro midhiya mubato wake, hapana ruzivo pamusoro penyaya yake inonzi yekuroora kana kuroora kuna Blessing. Nekudaro, zvichiri kuitika kuti angave achiroora kana iye asi asingafarire pachena.
Sezvenguva yekunyora, Osimhen anoita kunge asina kuroora uye akasarudza kutarisa nezvebasa rake pane kutsvaga musikana kana kuita pachena hukama hwake.
Victor Osimhen Childhood Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Upenyu hwehupenyu
Kuziva Victor Osimhen Hupenyu hwepamoyo kure nebhola kwaizokubatsira iwe kuwana mufananidzo uri nani wemunhu wake. Kutanga, iye munhu anoziva izvo zvechokwadi zvinoreva kuchengetedza uye kutsungirira, iyo meseji iyo iri nguva dzose pane yake yeWhatsapp pikicha.
"Ini handina kuvhiringidzwa neimwe nzira nehumwe hwemashoko akaipa uye zvinhu zvakanyorwa pamusoro pangu panguva yangu kuWolfsburg,.. Zvekare, nemashoko aya ake, unogona nyore nyore kunyengedza ari murwi.
Kunze kwebhola, Osimhen anoda kuteerera mimhanzi yeContemporter R & B newaaifarira achiri kusara "Ndinotenda ndinogona kubhururuka", Iro hit track jecha rwiyo rwemhanzi R Kelly. Dzimwe nguva, anoimba rwiyo rwaKelly nenzira yake panguva yekupemberera kwake kwezvinangwa. Munzvimbo yemimhanzi yemuno yeNigeria, Osimhen anonamatira naOlamide uye rake raanofarira track from the Nigerian hip-hop artist is 'agere pachigaro cheushe '.
Victor Osimhen Childhood Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Upenyu hweMhuri
Victor Osimhen, anozova muriritiri wemhuri yake anofara kuve akagadzira nzira yemhuri yake kuenda kurusununguko rwemari nekutenda nhabvu. Nhengo dzese dzemhuri (sekucherechedzwa pazasi) dzakamira pedyo naye panguva yake yerima varipo vachinakidzwa nevazere venhema zvinounzwa nehunyanzvi nhabvu.
Victor Osimhen Mhuri mitezo. Chikwereti kuNigerianNewsDirect
Pamusoro paBaba vaVictor Osimhen: Pa Patrick Osimhen ndiye chete mupenyu mubereki uye baba vemuzvarirwo vaVictor Osimhen. Aimbove maneja wemwanakomana wake kusvika 2015 paakapa basa reku maneja kumumiriri weFrance Oliver Noah weNoga Sports Management.
Baba vaVictor Osimhen (wechipiri kubva kurudyi), mwanakomana wavo uye Noga Sports Management timu. Kiredhiti AllNigeriaSoccer
Kana Patrick Osimhen ari muchengeti wepamutemo wemwanakomana wake, akamhanya nenyaya nevamwe vamiririri kuyedza kumupfuura mumubhadharo wekuwana mari kubva mukuendeswa kwemwanakomana wake kuWolfsburg. Iyi seti yevanhu pavaiyedza kumudarika, aisarudza kubata nemwanakomana wake wekutanga, Andrew Osimhen pamusoro pekutaurirana kwaVictor Osimhen.
Pamusoro paamai vaVictor Osimhen: Maererano nemishumo, zvinoita sekuti amai vaVictor Osimhen's anonoka. Iye anorova Nigerian sepaya panguva yekunyora kukudza amai vake nekuva nemufananidzo wavo semufananidzo mufananidzo paprofile yake ye instagram.
Amai vaVictor Osimhen. Chikwereti ku Instagram
Victor Osimhnen Siblings: Victor ane vanun'una vatanhatu muzvizere uye Andrew Osimhen anonyanya kuzivikanwa kupfuura chero hama yake. Kuda kwaVictor Osimhen kune hanzvadzi dzake hakuna miganhu. Waizviziva here? Akamboitsaurira mubairo wake weGolden Boot kune mumwe wehanzvadzi yake mushure mekunge abereka mwana musikana panguva yaakawana mubairo, munharaunda yaNovember 2015.
Victor Osimhen Childhood Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Lifestyle
Sezvo panguva yekunyora, Victor Osimhen kukosha kwemusika kwakakwira pamusoro pe13,00 mil. € maererano Chinjana Musika. Sezvinoonekwa kuburikidza nekwavo vezvenhau vanobata, iyi inopa mumabhazi doest tranform kuve nehupenyu hwakanaka hunoratidzika nyore hunowonekwa neruoko rwakati wandei rwemotokari dzinonakidza, dzimba uye dzimwe nguva, vasikana.
Victor Osimhen anogara hupenyu hwakareruka. Chikwereti ku Instagram
Ukatarisa kumashure kubva mukukura kwake nehasha uye kusarasika kwemhuri, zvine chokwadi chekuti Osimhen anofanira kuvakwa uye anofanira kuziva mashandisiro ake mari.
Victor Osimhen Childhood Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Untold Facts
Kunetsana Kwemhuri: Ramangwana raVictor Osimhen rakambokandwa mukuvhiringidzika zvichitevera dambudziko remhuri pamusoro pekuendeswa kwake. Nhengo dzemhuri yake dzaipesana pamusoro peaifanirwaimiririra mutambi.
Maererano nemishumo yepamhepo, babamunini vaOsimhen, Michael, akambotungamira boka revamiriri apo Andrew, mukuru wake museve weimwe boka. Mapoka ese ari maviri aive nevamiriri vawo vairwira mari yekuchinjisa uye kodzero dzechokwadi dzekumiririra mutambi. Dambudziko remhuri rakawana chinhanho chitsva pakabuda nhau mumapepanhau kuti baba vaOsimhen vakarohwa nemazituru pamusoro pekuramba kwavo kutendera mutambi kuenda kuWolfsburg. Yakazobviswa kubva mu nhema kuti manyepo. Zvakatora imwe nguva dambudziko remhuri risati rapera.
Iyo Lucky Nursery Nigerian Club: PaJanuary 1, 2017, Victor Osimhen akaendeswa kune $3,970,225 kuGerman kilabhu VfL Wolfsburg kubva kuUmagumo Striker Academy, kirabhu yemuno kuLagos.
Waizviziva here? Mari yekuchinjisa yakamuita mumwe wevatambi anodhura kuti asainwe zvakananga kubva kuchikwata chevakoti muAfrica kuenda kuchikwata chepamusoro cheEurope. Kuverenga huwandu hwekutsinhana uku panguva yekunyora, Ultimate Strikers academy yakawana hurepping huwandu hwe1.4 bhiriyoni Naira kubva kuVictor Osimhen kufambisa.
Nei Akaenda kuBelgium: Vazhinji vekuNigeria vanofarira kutanga basa ravo reEurope kuBelgian Kutanga Chikamu A. Ligi iri rave reMecca kune veNigeria vafambi mumakore apfuura uye ndiyo yakapa Victor Osimhen nhabvu yake yeEuropean.
Waizviziva here? Nigerian aimbove mukuru wekechles makocha anonoka Stephen Keshi izvo zvakakonzera kutungamirwa kweNigerian matarenda ekuzadza Belgium mukupedzisira 1980s. Zvinodiwa zvaDaniel Amokachi, Victor Ikpeba, Svondo Oliseh naAlloy Agu vese vakatanga basa ravo muBelgium. Ongorora: yaive kuBelgium Celestine Babayaro akakunda mubairo wake weEbony Shoe kumutambi akanakisa wemuAfrica muBelgian ligi.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu yaVictor Osimhen yeChikoro Chemwana uye Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.